Farmaajo oo siyaasadda arimaha dibadda dan gaar ah u adeegsanaya | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo siyaasadda arimaha dibadda dan gaar ah u adeegsanaya
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inuu dan gaar ah u adeegsanayo Siyaasadda arrimaha dibedda dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa sheegay in siyaasadda arimaha Dibadda ay noqotay mid gabi-dhac-layneysa maalmihii danbe oo aan lahayn Masdar fuliya iyo marjac loo celiyo.
Warsame, wuxuu tilmaamay in dowladda uu Farmaajo hoggaamiyo ay caadeysatay warqado uu wiifto ku tilmaamay oo si dag dag ah loo tabiyo iyadoo aan laga fiirsan, isla markaana aan Gole Wasiirro iyo mid amni iyo guddiyo arrimo dibadeed aysan ka tashan.
“Siyaasaddii arrimaha dibedda dalkeena waxey noqotay mudac uu Madaxweyne Farmaajo cid walba ku mudo. Warqad wiifta ah iyo war degdeg ahna lagu tebiyo. Intii go’aan la soo saarayey ma jirin masdar uu ka soo fulay iyo marjic loo celiyo. Ma jirto meel ay gole wasiirro, gole amni qaran, guddiyo arrimo dibadeed iyo gaashaandhig ee labada aqal ee Baarlamaanka iyo gole wadatashi qaran midkoodna talo ku lahaayeen”. Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, wuxuu Farmaajo kula taliyay in Siyaasadda arrimaha dibedda ay noqoto mid dan qaran ku qotonta, xurgufta jirta ayuu ku baaqay in xal laga gaaro, wuxuuna ka digay wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah ee midba maalin la la dhuminayo.
“Siyaasadda arrimaha dibedda waa in ay dan qaran ku qotontaa, dowladduna waa in ay saaxiib soo kasbata ama cadaawad soo dhintaa, ma aha in ay subax walba saaxib lumisaa ama cadaw soo kasbataa”.